Bahamas: Ny setrin’ny heloka bevava? · Global Voices teny Malagasy
Bahamas: Ny setrin'ny heloka bevava?
Voadika ny 26 Oktobra 2007 16:18 GMT
Ny mpikarajia amin'ny onjam-peo maro no mihevitra fa ny fanamafisana ny fanamelohana ho faty no ahafahana misoroka ny fitombon'ny heloka bevava. Miezaka hanazava ny heviny izay mifanohitra amin'izany fironan'ny be sy ny maro izany kosa i Rick Lowe ao amin'ny weblogBahamas.com. Sombiny kely holazaiko voasoratra ao ny hoe misy andraikitry ny rehetra ilay heloka, sy ny hoe mety ho tsy mifanaraka amin'ny heloka ny fanamelohana ary ny fampieritreretana hoe eritrereto tsara raha ny havanao no sanatria voampanga ho voampanga amin'izany fanamelohana izany.
3 andro izayEtazonia
Marihina fa samy nanoratra momba ity fanamelohana ho faty ity avokoa izaho sy i Tomavana koa jereo ireo sao mahaliana anao.
26 Oktobra 2007, 16:22
Misaotra an’i Jentilisa 😉 ary aleo angamba marihiko kely fa ny fanamelohana ho faty any Madagasikara no novoaboasanay, ary any amin’ny blaoginay tsirairay avy no ahitana ireo lahantsoratra ireo.
26 Oktobra 2007, 16:26
Ny an’ny Tomavana dia azonao jerena eto (tsindrio) ary ny ahy kosa dia azonao vakiana eto (tsindrio koa) satria mifandaka ihany ny hevitray nefa dia miara-miasa soa aman-tsara izahay mirahalahy eto amin’ity sehatra ity.
26 Oktobra 2007, 16:29
Tsy voatery hitovy hevitra foana anie, satria samihafa ny taona, ireo làlana nozohina, ny fitaizana, ny traikefa, ny fiaraha-monina nitomboana sns … anefa tsy heverinay fa manakana ny fiaraha-miasa izany. Ny ifankahalalana bebe kokoa mantsy dia isan’ny tanjona iray koa, satria angamba samy eo am-pitadiavana izay hevitra tena mahomby hanasoavana ity firenena iombonana ity na izaho, na izy … na ianao …
Isak’izay mitranga izany dia “ekeko ny tsy fitovian-kevitray” [I agree to disagree | je suis d’accord de notre désaccord] 😉 Ary ny anao mba inona no hevitrao ?
26 Oktobra 2007, 19:40